Madaxtooyada Soomaaliya oo ku dhawaaqday war farxad galiyay Shacabka kusugan Gaalkacyo, Carmo & Boosaaso.
MUQDISHO(P-TIMES)- Todobaadkii lasoo dhaafay barta bulshadu ku xariirto ee FACEBOOK-ga waxaa qabsaday Muuqaalo laga soo duubay gabar yar oo lagu magacaabo Samsam Maxamed Dhakool oo kunool magaalada Carmo ee gobalka Barri & banaanbax ay dad Soomaaliyeed ku dhigeen magaalada Gaalkacyo ee Puntland oo ay ku codsanayeen in wax laga qabto dhalinyarro Soomaaliyeed oo iskaga xiran dalka Cumaan.
Samsam oo ilinta indhaheeda soo dhaaftay, markii ay sheegtay in aysan aabaheed meel ku sheegi karin, markastana loo sheego in uu ku jiro xabsiyada dalka Cumaan ayay ka codsatay Madaxda dawladda Soomaaliya in ay cabashadeeda wax ka qabtaan oo ay xaliyaan.
Banaanbaxayaasha magaalada Gaalkacyo ayaa sidaas oo kale ka codsaday Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya iyo Wasiirkiisa koowaad in ay jawaab ka baxshaan dalabkooda oo ay u raadiyaan wiilashooda.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga wuxuu ku sheegay in ay dawladda Soomaaliya soo gaartay dalabka ay muujiyeen Samsam iyo dadka Soomaaliyeed ee cabashada ka dhigay magaalada Gaalkacyo.
Agaasimaha ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya ku bixinayso sidii ay dhalinyaraddan u heli lahaayeen xoriyadooda dadaal kasta oo iskugu jira dhinacyada sharciga iyo Diblumaasiyadda.
“Qaylo-dhaantiina waa la maqlay, waxaana Dowladda Federaalka Soomaaliya qaadeysaa tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed iyo mid sharci intaba oo suurta galin karta in maxaabiistan lagu soo celiyo dalkooda Insha Allaah” ayuu yiri Agaasimuhu.
Talaabada ay qaaday Madaxtooyada Soomaaliya ee ay ku baadigoobayso dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ay horey waxba uga qaban waayeen maamuladii iskaga dambeeyey Puntland ayaa ka dhignaan doonta talaabo bogaadin mudan oo ka farxinaysa Shacabka Soomaaliyeed ee kunool mandiqada Puntland.